Bọketị China Elevator, Chain Chackles & Connectors, Chain Wheels, Chain Sprockets, Conveyor Chains factory na suppliers | Chigong
igwe nchara njikọ njikọ igwe, igwe ihe njikọ njikọta, ihe mkpuchi njikọ njikọ gburugburu, eriri njikọ DIN 766, eriri igwe njikọ DIN 764, eriri DIN 745/5699, agbụ ígwè mbuli elu, agbụ njikọ njikọ njikọta, eriri njikọ njikọ gburugburu, njikọ gburugburu sprocket chain, heko chain chackles, njikọ njikọ njikọ njikọta, njikọ njikọ heko, bọket mbuli, mgbakwunye ịwụ.
igwe mbuli elu, onye na -ebugharị yinye, ndị na -ebugharị ihe nchara
Iji mee akụkụ ruru eru maka igwe mbuli elu yinye, njikwa SCIC kacha mkpa bụ:
- Nyocha nyocha na nkwado nke ndị ahịa;
- Nhọrọ nke ihe nchara na nyocha kwa akwụkwọ nhazi;
- ibe ya, ịgbado ọkụ, igwe CNC, wdg.
- ọgwụgwọ ọgwụgwọ na nnwale iji nweta akụrụngwa arụpụtara arụpụtara;
- Ogo imecha elu ya na njikwa mkpuchi mkpuchi.
Nke gara aga: G-2150 kpọchie Ụdị Chackle
Osote: Ọnụ ego dị ala maka ihe eji eme ihe na -acha uhie uhie nke China maka ịme Tubes enweghị nkebi 321 Ogwe Roud
onye nrụpụta igwe mbuli elu ịwụ
Chain na njikọta
akụkụ eriri ebu
ụlọ ọrụ ịwụ mbuli